15+ Cách Tăng Tốc Độ Máy Tính Win 10 ĐƠN GIẢN | Muasalebang - Muasalebang
15+ Cách Tăng Tốc Độ Máy Tính Win 10 ĐƠN GIẢN | Muasalebang
Đang Đọc: 15+ Cách Tăng Tốc Độ Máy Tính Win 10 ĐƠN GIẢN | Muasalebang in Muasalebang
Usuqedile ukufaka i-Windows 10, kodwa ikhompuyutha yakho isebenza kancane. Ungakhathazeki, ngendlela ukwandisa isivinini sekhompyutha windows 10 ukuthi i-HC Electronics Supermarket isizokwabelana ngezansi izokusiza ukuxazulula le nkinga! Hlala ubukele!
1 1. Vala Ukubuyisela Isistimu
2 2. Sheshisa eyakho Windows 10 ikhompuyutha ngokuvala izinhlelo zokusebenza zasemuva
3 3. Izinketho zamandla: Ukusebenza okuphezulu
4 4. Vala i-Windows Defender
5 5. Hlola Izinhlelo Zokuqalisa
6 6. Khulisa isivinini sokuqalisa ikhompyutha
7 7. Vala izinsiza ezingasetshenzisiwe ezisebenza ngemuva
8 8. Thuthukisa, buyisela i-HDD evamile ngedrayivu ye-SSD
9 9. Ukuhlukaniswa kweDiski (i-HDD)
10 10. Vala imiphumela yezithombe, izithonjana ezibonisa ngale Windows 10
11 11. Khulisa isivinini senethiwekhi
12 12. Cisha i-firewall – I-Windows Firewall
13 13. Khubaza umsizi obonakalayo we-Cortana
14 14. Lungisa amaphutha ohlelweni
15 15. Vuselela umshayeli wekhompyutha yakho enguqulweni yakamuva
16 16. Vala imiphumela yomsindo
17 17. Vala izikhangiso ze-Windows 10
18 18. Susa izinhlelo zokusebenza nezici ze-Windows ezingasasebenzi
19 19. Vala okubukwayo
1. Vala Ukubuyisela Isistimu
– Uma ungafuni ukusebenzisa umsebenzi Wokubuyisela Isistimu, kufanele uyivale, ukuze ukhulule inkumbulo, indawo yokugcina kanye nokukhawulela izinsizakalo ezisebenza ngemuva Windows 10.
– Ukucisha Ukubuyisela Isistimu i-laptop Usebenzisa iWindows 10, wenza lezi zinyathelo ezilandelayo:
Isinyathelo 1: Uya kubha yamathuluzi yokusesha igama elingukhiye Izilungiselelo zesistimu ezithuthukisiwe.
Isinyathelo sesi-2: Bese ukhetha ithebhu Ukuvikelwa Kwesistimukwimodi ezenzakalelayo le modi ivuliwe (Ukuvikelwa = Kuvuliwe).
Isinyathelo sesi-3: Cindezela inkinobho Lungiselelaiwindi elilandelayo lizovela, khetha Khubaza ukuvikelwa kwesistimu ukuvala umsebenzi Wokubuyisela Isistimu
Isinyathelo sesi-4: Ekugcineni, uyacindezela KULUNGILE ukuqedela.
2. Sheshisa eyakho Windows 10 ikhompuyutha ngokuvala izinhlelo zokusebenza zasemuva
– Izinhlelo zokusebenza ezingemuva ziyimbangela evamile yokuthi ikhompuyutha yakho ihambe kancane.
– Izinhlelo zokusebenza ongazisebenzisi kodwa zisasebenza buthule ukuze ubuyekeze idatha, ubonise izaziso, …
– Ungavala izinhlelo zokusebenza ezingemuva ngokuthi:
Isinyathelo 1: Uyavula Ukusetha bese ukhetha Ubumfihlo.
Isinyathelo sesi-2: Uyakhetha Izinhlelo zokusebenza ezingemuva bese uchofoza inkinobho Khanyisa cisha kulayini Vumela izinhlelo zokusebenza zisebenze ngemuva ukuvala zonke izinhlelo zokusebenza ezingemuva noma ukhethe izinhlelo zokusebenza ezingazodwana ezingasebenza ngemuva ngokwezidingo zakho.
3. Izinketho zamandla: Ukusebenza okuphezulu
– IWindows ikuvumela ukuthi ukhethe umthombo wamandla ofanele izidingo zakho.
– Uma uxhunyiwe, inketho “Yokusebenza Okuphezulu” izokwenza ikhompuyutha isebenze ngokushesha (Idla amandla amaningi kunemodi “Yokulondolozwa Kwebhethri”).
– Ukuvula izinketho zamandla
Isinyathelo 1: Uchofoza isithonjana sebhethri ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini
Isinyathelo sesi-2: Uyachofoza “Ukusebenza okuhle kakhulu” ukusebenzisa umthombo wamandla ngokusebenza okuphezulu.
Xem Thêm Làm sao để máy tính để bàn có thể khời động được | Muasalebang
4. Vala i-Windows Defender
– Nge-Windows 10, ungakwazi ukwandisa isivinini sekhompyutha windows 10 ngokukhubaza i-Windows Defender okwesikhashana.
Nokho, ngemva kwesikhathi esingu-1 kuphela, izosebenza futhi.
– Ukuze ukhubaze okwesikhashana i-Windows Defender kuzilungiselelo, landela lezi zinyathelo:
Isinyathelo 1: Kuthreyi yesistimu, chofoza kabili isithonjana IWindows Defender noma chofoza kwesokudla khetha Vula
Isinyathelo sesi-2: I-interface ye-Windows Defender Security Center iyavula, chofoza entweni Ukuvikela amagciwane nosongo
Isinyathelo sesi-3: Okulandelayo, uchofoza inketho Izilungiselelo zokuvikela amagciwane nosongo
Isinyathelo sesi-4: Shintsha isimo senketho Ukuvikelwa kwesikhathi sangempela zikanokusho VALIWE.
5. Hlola Izinhlelo Zokuqalisa
– Lezi zinhlelo zokuqalisa zizoqala ngekhompyutha yakho.
– Vala izinhlelo zokusebenza ezingadingekile ukwenza idivayisi yakho iqale ngokushesha.
Ukuze uvale izinhlelo, landela lezi zinyathelo:
Isinyathelo 1: Uchofoza kwesokudla ku-Taskbar bese ukhetha Umphathi womsebenzi
Isinyathelo sesi-2: Bese ukhetha ithebhu Qalisa.
Isinyathelo sesi-3: Uchofoza kwesokudla kuhlelo ongafuni ukuluqala ngeWindows bese ukhetha Khubaza ukuze zingacushiwe.
Buka Okuningi: Izimbangela zokulahleka komsindo wekhompyutha nendlela yokuyilungisa
6. Khulisa isivinini sokuqalisa ikhompyutha
– Ungakwazi ukusheshisa ikhompyutha ye-Windows 10 ngokwandisa isivinini sokuqalisa ikhompyutha ngokusetha kabusha isikhathi se-BOOT.
Kukhompyutha, ukuqala kabusha kuyinqubo yokulayisha noma i-bootstrapping ukuze kuqalwe uhlelo lokusebenza lapho umsebenzisi evula isistimu yekhompyutha.
– Umhlahlandlela Wokuqalisa:
Isinyathelo 1: Ubhala igama elingukhiye “Ukucushwa Kwesistimu” iya kubha yokusesha yeWindows bese ukhetha Ukucushwa Kwesistimu.
Isinyathelo sesi-2: Uyalivula ikhadi Bhuqaebhokisini lokuvala isikhathi faka “3“bese ukhetha Izinketho ezithuthukisiwe…
Isinyathelo sesi-3:kwe o Inani lamaphrosesa (Memezela inani lama-CPU cores angasebenza), ukhetha “4”
Isinyathelo sesi-4: Ekugcineni, ucindezela izikhathi ezi-2 zilandelana KULUNGILE ukuqedela.
7. Vala izinsiza ezingasetshenzisiwe ezisebenza ngemuva
Isinyathelo 1: Uchofoza kwesokudla kusithonjana Le PC bese ukhetha Phatha.
Isinyathelo sesi-2: Uyakhetha Amasevisi Nezicelo bese ukhetha Amasevisi.
Isinyathelo sesi-3: Khetha isevisi ofuna ukuyicisha, chofoza kwesokudla, khetha Izakhiwo
Isinyathelo sesi-4: Emugqeni wohlobo Lokuqalisa, chofoza umcibisholo wokudonsela phansi bese ukhetha Ikhutshaziwe. Bese ucindezela KULUNGILE ukuqedela.
8. Thuthukisa, buyisela i-HDD evamile ngedrayivu ye-SSD
– Namuhla, ubuchwepheshe be-hard drive buye bashintsha kakhulu, ngentengo ethambile uma kuqhathaniswa nangaphambili, kodwa usengasebenzisa ulayini wakamuva we-SSD onekhono lokulondoloza elingcono kakhulu kunangaphambili ukuze usheshise ikhompuyutha yakho. Windows 10 isibali.
– Isivinini sokufinyelela idatha sishesha kakhulu kune-HDD, ngakho-ke i-Windows 10 kukhompuyutha yakho nayo izizwa ishesha kakhulu.
9. Ukuhlukaniswa kweDiski (i-HDD)
– Ukuhlukaniswa kwediski kungaholela ekusebenzeni kwekhompuyutha, ukunensa, ukusebenza kancane kancane futhi kunciphise kakhulu ukusebenza kwekhompyutha.
Xem Thêm Gaming Dell G3 15 3500 i7-10750H Học Online Giá Tốt, Trả Góp | Muasalebang
– Nciphisa idrayivu:
Isinyathelo 1: Chofoza kwesokudla kudrayivu ofuna ukuyihlehlisa bese ukhetha Izakhiwo
Isinyathelo sesi-2: Lapha, ukhetha ikhadi Amathuluzi bese ukhetha Lungiselela.
Isinyathelo sesi-3: Khetha idrayivu ofuna ukuyihlehlisa bese ukhetha Hlaziyalinda ukuthi uhlelo luhlole (Imiphumela ibonisa ukuthi idrayivu ye-C inezinga lokuhlukaniswa lika-2%)
Isinyathelo sesi-4: Ekugcineni, ukhetha Lungiselela ukwenza i-defrag bese ulinda ize iqedwe.
– Ungenzi i-defragmentation ku-SSD ngoba lokhu akudingekile, kunciphisa impilo ye-hard drive.
10. Vala imiphumela yezithombe, izithonjana ezibonisa ngale Windows 10
– Umphumela wesithombe ushintsho olukhulu kakhulu kusukela esikhathini se-Windows XP nangaphezulu, kukhompyutha emiswe kahle yinhle, yinhle kakhulu, kodwa emishinini evamile, ebuthakathaka, ephakathi, iwukuhlukumeza. .
– Ukusheshisa ikhompyutha ye-Windows 10 ngokuvala imiphumela, landela lezi zinyathelo:
Isinyathelo 1: Vuliwe Windows 10, chofoza kwesokudla kusizinda sedeskithophu bese ukhetha Yenza kube ngokwakho
Isinyathelo sesi-2: Ukhetha ukuya Imibala. Vala zonke izinketho Imiphumela yokubonisa ngalefuthi ususe ukumaka amabhokisi okuthi Qala, ibha yomsebenzi, nesikhungo sesenzo namabha Esihloko
11. Khulisa isivinini senethiwekhi
– Isivinini senethiwekhi futhi siyisici esithinta ngqo ukusebenza kweWindows.
– Ungathuthukisa isivinini senethiwekhi ngokuthi:
+ Shintsha umkhawulo womkhawulokudonsa:
Isinyathelo 1: Ucindezela inhlanganisela yokhiye IWindows + ishibhile ukuze kuvele ibhokisi lengxoxo Gijima bese ufaka ulayini “gpedit.msc“, khetha KULUNGILE.
Isinyathelo sesi-2: Uyakhetha Izifanekiso Zokuphathakhetha Inethiwekhi.
Isinyathelo sesi-3: Qhubeka ukukhetha I-QoS Packet Scheduler.
Isinyathelo sesi-4: Uyakhetha Khawulela umkhawulokudonsa wokubekisaumkhaza Inikwe amandla
Isinyathelo sesi-5: Ebhokisini Umkhawulo wobubanzi (%), ufaka ““bese Khetha Faka isicelo. Cindezela KULUNGILE ukuqedela..
+ Shintsha ikheli leseva ye-DNS
Isinyathelo 1: Uyavula Iphaneli yokulawulakhetha Isikhungo Senethiwekhi Nokwabelana
Isinyathelo sesi-2: Uyakhetha Shintsha izilungiselelo ze-adaptha bese uchofoza kwesokudla kusithonjana I-Ethernet noma i-Wifi oyisebenzisayo, khetha Izakhiwo.
Isinyathelo sesi-3: Khetha I-Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) bese ukhetha Izakhiwo
Isinyathelo sesi-4: Lapha ufaka ikheli leseva ye-DNS njengoba kukhonjisiwe ngezansi bese ucindezela KULUNGILE ukuqedela.
12. Cisha i-firewall – I-Windows Firewall
– Isici se-Firewall kumakhompuyutha omuntu siqu cishe… akekho osisebenzisayo, ngakho-ke sivale ukuze usheshise eyakho Windows 10 ikhompuyutha.
Isinyathelo 1: Uyavula Iphaneli yokulawula bese ucindezela IWindows Firewall.
Isinyathelo sesi-2: Esimeni Vula noma uvale i-Windows Firewalluyakhetha Valabese ucindezela KULUNGILE.
13. Khubaza umsizi obonakalayo we-Cortana
– Umsizi we-Cortana virtual ukusiza ukuthi uyale ikhompuyutha ngezwi (Kufanele usebenzise isiNgisi).
– Uma uzwa sengathi i-Cortana ayinalo usizo kuwe, ungayivala ukuze wonge izinsiza eziningi zekhompyutha.
– Imiyalo yokukhubaza umsizi we-Cortana virtual:
Isinyathelo 1: Ucindezela inhlanganisela yokhiye IWindows + ishibhile ukuze avele Run ibhokisi lengxoxo bese ufaka umugqa “gpedit.msc“, bese ukhetha KULUNGILE.
Isinyathelo sesi-2: Uyakhetha Izifanekiso Zokuphatha bese ukhetha Izingxenye zeWindows
Isinyathelo sesi-3: Khetha Sesha bese ukhetha Vumela uCortana.
Isinyathelo sesi-4: Uphawu lokuhlola Ikhutshaziwekhetha Faka isicelo bese ucindezela KULUNGILE ukuqedela.
14. Lungisa amaphutha ohlelweni
– Umsebenzi wokuxazulula inkinga uvuliwe Windows 10 ikusiza ukuthi uthole futhi ulungise amaphutha avamile njengamaphutha okuxhumana kwenethiwekhi, amaphutha omsindo, amaphutha ephrinta, …
– Imiyalo yokuthi ungasheshisa kanjani i-Windows 10 laptop ngokulungisa amaphutha esistimu:
Isinyathelo 1: Uyavula Ukusetha bese ukhetha Ukubuyekeza Nokuphepha
Isinyathelo sesi-2: Uyaqhubeka nokukhetha Xazulula inkinga bese ukhetha ingxenye ofuna ukuyilungisa.
Isinyathelo sesi-3: Uyacindezela Qalisa isixazululi sezinkinga ukuqedela.
15. Vuselela umshayeli wekhompyutha yakho enguqulweni yakamuva
– Inguqulo entsha yomshayeli izolungisa amaphutha enguqulo endala futhi ithuthukise ukusebenza.
– Ungabuyekeza kanjani abashayeli ukusheshisa Windows 10 amakhompyutha ngale ndlela elandelayo:
Isinyathelo 1: Uchofoza kwesokudla kusithonjana Le PCkhetha Phatha
Isinyathelo sesi-2: Uyakhetha Umphathi wedivayisi bese ukhetha igama lomshayeli ofuna ukumbuyekeza
Isinyathelo sesi-3: Uchofoza kwesokudla bese ukhetha Buyekeza abashayelikhetha Sesha ngokuzenzakalelayo isofthiwe yomshayeli ebuyekeziwe.
16. Vala imiphumela yomsindo
– Awuyithandi imisindo yesistimu noma izinhlelo zokusebenza ezihlala zidlala futhi zikuphazamisa.
– Vala imiphumela yomsindo kalula nge:
Isinyathelo 1: Uyavula Iphaneli yokulawulakhetha Umsindo ukuvula ithebhu ethi Imisindo
Isinyathelo sesi-2: Ngaphansi komugqa Uhlelo Lomsindochofoza umcibisholo wokudonsela phansi bese ukhetha Ayikho Imisindo
Isinyathelo sesi-3: Cindezela KULUNGILE ukuqedela.
17. Vala izikhangiso ze-Windows 10
– Vala izikhangiso esikrinini sokukhiya
Isinyathelo 1: Uyavula Ukusetha bese ukhetha Ukwenza kube ngokwakho.
Isinyathelo sesi-2: Uyakhetha Khiya isikrini ukushintsha isimo sibe Valiwe kulayini Thola amaqiniso ajabulisayo, amathiphu, amaqhinga nokuningi esikrinini sakho sokukhiya.
– Vala izikhangiso ku-Start Menu
Isinyathelo 1: Uyavula Ukusetha bese ukhetha Ukwenza kube ngokwakho
Isinyathelo sesi-2: Uyakhetha Qala: Emgqeni Bonisa iziphakamiso ngezikhathi ezithile kokuthi Qalashintsha isimo sibe Valiwe.
18. Susa izinhlelo zokusebenza nezici ze-Windows ezingasasebenzi
– Kukhona ezinye izinhlelo zokusebenza ezifakwe ngokuzenzakalelayo iWindows. Ungazisusa ukuze uvule isikhala ukuze ezinye izinhlelo zokusebenza zisebenze kangcono futhi usheshise eyakho Windows 10 ikhompuyutha.
– Khipha lezi zinhlelo zokusebenza nezici ngokwenza lokhu:
Isinyathelo 1: Uyavula Ukusetha bese ukhetha Izinhlelo zokusebenza
Isinyathelo sesi-2: Ingxenye Izinhlelo zokusebenza nezicikhetha uhlelo lokusebenza ofuna ukulususa bese ukhetha Khipha.
19. Vala okubukwayo
– Imiphumela yokubukwa ebukhali izokwenza ukhange nakakhulu uma usebenzisa, kodwa lesi futhi isizathu esenza ikhompuyutha yakho isebenze kancane.
– Uyivala kanjani imiphumela ebonakalayo:
Isinyathelo 1: Uyavula Iphaneli yokulawulakhetha Uhlelo bese ukhetha Izilungiselelo zesistimu ezithuthukisiwe.
Isinyathelo sesi-2: Ingxenye Okuthuthukisiwe, khetha Izilungiselelo.
Isinyathelo sesi-3: Ekhadini Visual Effectskhetha Lungisa ukusebenza kahle kakhulu (Ungakhetha Okwezifiso ukuze unike amandla/ukhubaze imithelela yokubuka yezakhi ngendlela othanda ngayo.)
– Idivayisi yakho izosebenza ngokushesha uma ukhetha Lungisa ukuze uthole imodi yokusebenza ehamba phambili.
– Nokho, okuqukethwe okubonisiwe kuzoba lufifi, okungase kube yingozi emehlweni uma ngokuvamile usebenza ngale modi.
Ngakho lesi sihloko esingenhla sikuqondise ukuthi wenze kanjani ukwandisa isivinini sekhompyutha windows 10, ikusiza ukuthi usebenze ngokuphumelelayo. Ngikufisela inhlanhla!
Laptop MacBook Air 2019 i5 MVFM2SA/A | Muasalebang